Koh Samui nke Thailand gaghachiri na ndị njem mba ụwa | Akụkọ njem banyere Thailand
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi banyere njem na Thailand » Koh Samui nke Thailand gaghachiri na ndị njem mba ụwa
Koh Samui nke Thailand gaghachiri na ndị njem mba ụwa
SKÅL nabatara imeghe agwaetiti nke abụọ kachasị na Thailand iji gbaa ndị njem si mba ọzọ ọgwụ mgbochi na mmemme SAMUI + PLUS.
Ndị njem ga-esiriri na nnabata obodo akwadoro, ma ha ga-anọrịrị n’obodo ahụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị iri abụọ na otu.
Ndị ọbịbịa ndị okenye ga-agbata ọgwụ mgbochi zuru oke site na ọgwụ mgbochi COVID-19 nke na-erughị ụbọchị 14 tupu ụbọchị njem.
Ọbịbịa si na Bangkok International Airport Suvarnabhumi ma nyefee na ọdụ ụgbọ elu Bangkok Airways maka ụgbọ elu ụgbọ elu gaa Koh Samui site n'okporo ụzọ njem.
Koh Samui - ThailandAgwaetiti nke abụọ kachasị na agwaetiti agbata obi ya bụ Koh Phangan na Koh Tao - emegherela ndị njem mba ofesi ịgba ọgwụ mgbochi na-enweghị iche iche na atụmatụ njem njem ọhụrụ nke SAMUI + nke ebumnuche iji bido ịmalite njem njem njem nke agwaetiti ahụ nke ọrịa Covid-19 bibiri.
Samukpụrụ Samui + na-anọchite anya ọnwa nke atụmatụ na imekọ ihe ọnụ n'etiti isi ndị njem na Thailand, TAT [Thailand Association of Tourism], THA [Thailand Hotels Association], TAKS [Tourism Association of Koh Samui], gọọmentị na ndị ọrụ nzuzo, ndị ndị nnọchi anya ha gara emume mmemme n'abalị ụnyaahụ na Banana FanSea Resort na Samui ama ama Chaweng Beach.
SAMUI + Plus Model - Na ileba anya, otu o si arụ ọrụ maka ndị ọbịa mba ụwa gbara ọgwụ mgbochi:
Akwụkwọ nke ntinye (COE).
Ihe na-adịghị mma RT-PCR COVID-19 na-anwale karịa 72 awa tupu ụbọchị njem.
Ndị njem n'okpuru 18 anaghị achọ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi, mana ha ga-eso ndị nne na nna ma ọ bụ ndị nlekọta gbara ọgwụ mgbochi zuru oke ma gosipụta nyocha RT-PCR COVID-19 na-adịghị mma.
Amụma mkpuchi mkpuchi mkpuchi COVID-19 nke opekata mpe $ 100,000.
Kwesịrị ịnọ naanị na ụlọ nkwari akụ akwadoro ALQ maka abalị 7 mbụ ha nọrọ.
Nwere ike ịnọ n'ụlọ nkwari akụ akwadoro SHA + Plus ma ọ bụ ụlọ obibi nkeonwe na Koh Samui, Koh Phangan ma ọ bụ Koh Tao maka abalị 7 na-esote ha nọrọ Koh Samui.
A ghaghị ịdebanye akwụkwọ ụgbọelu na ụlọ nkwari akụ niile ma kwụọ ụgwọ ma kwụọ ụgwọ maka ule 3 x RT-PCR COVID-19.
Kwesịrị ibudata ma wụnye ngwa njikere.